Jery taratra… herinandro : savorovoro lasa horohoro… | NewsMada
Jery taratra… herinandro : savorovoro lasa horohoro…
Nampisavorovoro ny “Raharaha Andriamananoro Augustin“. Nohafainganina ny fitsarana, mbola notanana vonjimaika teny am-ponja izy. Nolavin’ny mpisolovava azy avokoa ny fiampangana: fanakaramana olona hanao hetsika tany Soamahamanina, nitaona vahoaka hidina an-dalambe, nanohintohina filaminam-bahoaka…
Mbola mampisavorovoro ny toeran’ny mpanohitra eo anivon’ny Antenimierampirenena. Tsy tonga tamin’ny fotoana nomeny hihaonana amin’ny VPM-MMM ny filohany. Nambaran’io vondrona politika io fa manao loham-boto ny fitondrana amin’izay tsy fanajam-potoana izay. Hiady hatramin’ny farany izy ireo.
Namoaka fanambarana ny Sefafi fa fampanantenana fotsiny ny hoe fanomezan’ny fanjakana 200 tapitrisa Ar isaky ny distrika ho amin’ny fampandrosoana ifotony. Tsy misy izay fitsinjaram-pahefana, raha misisika hitantana ankolaka izany hatrany ny fanjakana foibe. Lasa mampisavorovoro an-toerana ny raharaha.
Vao tadiavina izay marimaritra iraisana na hofidina na hotendrena izay hiandraikitra ny fitantanana ny fokontany ny fitondram-panjakana, nikarakara atrikasa. Mila fanitsiana ny lalàmpanorenana, milaza fa kitro ifaharan’ny fampandrosoana ifotony ny fokontany nefa tsy vondrombahoaka itsinjaram-pahefana.
Vita ny Dina iombonan’ny firaisamonina sivily, izay nakan-kevitra tamina fikambanana 500 mahery tamina faritra 18 amin’ny 22. Nisy ny fanaovan-tsonia amin’ireo firaisamonina sivily mitovy fijery hampitoviana ny soatoavina, ny fomba fiasa, ny tanjona, ny vina… Hafa ireo miaraka amin’ny minisiteran’ny Serasera.
Nambaran’ny Praiminisitra teo aloha, ny Jly Camille Vital, fa tokony hatsahatra ny fanenjehana mpanohitra. Mila fifanatonana sy fifampidinihana ny raharaham-pirenena. Tsy mampilamina ny vahoaka, na amin’izao fety izao aza, ny tsy fandriampahalemana, ny fidangan’ny vidim-piainana, ny tsy fanjarian-tsakafo…
Izany karazana savorovoro rehetra izany, zary horohoro… Tsy azo antoka tsinona izay havoakan’ny ampitso, na ny anio aza?